असल संस्कारको विकासमा महिला जेसिज - Rajmarg Online
असल संस्कारको विकासमा महिला जेसिज
दाङ महिला जेसिजले महिलाको व्यक्तित्वसंगै नेतृत्व विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । असल समाज निर्माणमा असल संस्कारको विकासमा अघि देखिएको दाङ महिला जेसिजमा वर्ष २०२१ का लागि नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ ।
समाजप्रति महिला जेसिजले खेलेको भूमिका, आगामी कार्ययोजना लगायतका विषयमा वर्ष २०२१ का अध्यक्ष ममता विष्टसंग कुराकानी गरेका छौँ ।–सम्पादक
१.सर्वप्रथम त, यहाँलाई स्वागत अनि बधाई छ ।
धन्यवाद, तपाई लगायत राजमार्ग अनलाईन परिवार सम्पूर्णलाई म र मेरो संस्थागत परिवारको तर्फबाट ।
२.नेतृत्व तहमा पुग्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?
मलाई दाङ महिला जेसिजको नेतृत्वमा पु¥याउनुहुने सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । सबैको साथ र सहयोगले म यो स्थानसम्म आइपुगेको छु । सन् २०१२ देखि म यस संस्थामा आवद्ध भएको हुँ । शुरुमा प्रवेश गर्दा सबै कुरा असम्भव जस्तै लाग्दथ्यो, तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेजस्तै आज यो पनि सम्भव रहेछ भन्ने बुझेकी छु ।
३.तपाईका योजना के–के छन् ?
मैले पुराना गर्न बाँकी रहेका कामलाई निरन्तरता दिदैँ नयाँ काम गर्ने पनि योजना बनाएको छु । विषेशत: धेरै दाङ महिला जेसिज महिलाको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासमा बढी जोड दिने गर्दछ । ति कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अरु सामाजिक उत्तरदायित्वका काम पनि गर्ने योजना बनाएको छु । हामीहरुले विभिन्न चार वटा चरणमा गरेर काम गर्ने गरेका छौँ ।
सामुदायिक ,व्यक्तिगत, अन्तर्राष्ट्रिय र व्यवस्थापन गरेर चार चरणमा हाम्रो काम हुने गर्दछ । त्यस अन्तगर्त लागुऔषध दुव्र्यसनीबारे सचेतना, महिला हिंसा, बालबिवाह लगायतका बारेमा सचेतनामूलक काम गर्ने गर्दछौँ । अहिले पद हस्तारण त भइसकेको छैन्, तर पनि योजनाहरु छन् । यसै महिनाको २५ गते पद हस्तान्तर भइसकेपछि हाम्रो काम शुरु हुन्छ ।
४.योजनालाई सफल बनाउन के कुराको आवश्यकता बढी देख्नुहुन्छ ?
अब विषेश गरी योजना सफल बनाउनको लागि म त सहकर्मीको साथ र सहयोग नै महत्वपूर्ण ठान्दछु । म एक्लैले गरेर केहि हुँदैन् । नेतृत्वमा म भएपनि काम हामी सबै मिलेर गर्नेछौँ । बिगतका वर्षमाहरुमा पनि धेरै जनासंग अरु पदमा रहेर काम गरिसकेको छु । उहाँहरुसंगको समन्वय झन् बलियो बनाएर गरिएका योजना सफल बनाउन सकिन्छ ।
५. आर्थिक पक्षलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? हो, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नका लागि धन्यवाद, कुनै पनि काम गर्नका लागि आर्थिक सवलीकरण नै प्रमुख पक्ष हो । आर्थिक व्यवस्थापन भनेको हामी त उहि सहयोग र सहकार्य भन्ने उद्देश्यका साथ सबै संग समन्वय गरी काम गछौँ ।
आर्थिक पक्षलाई हेर्दा केहि कठिन देखिएपनि हामीले त्यसलाई कठिनको रुपमा लिदैँनौँ । त्यसलाई एउटा संघर्षको रुपमा लिन सकिन्छ । विषेशगरी सबै साथीभाईको महत्वपूर्ण साथ र सहयोगले आर्थिक पक्षलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ ।
६. चुनौतिको आँकलन गर्नुभएको छ ?
छ नि , अब कुनै पनि काम गर्दा समस्या संगसंगै हुन्छ । ति चुनौतिलाई सामना गरेर अघि बढ्न सकियो भने नै महानता हुन्छ । तेस्रो र सिधाबाटो त जो पनि हिड्न सक्छ, घुम्ति र उकाली–ओराली बाटोमा हिड्न सकियो भनेपछि पो त महानता भयो । तर हाम्रो समुहमा त्यस्ता किसिमका बाधा अड्चन आउँदैनन्, आएपनि म एक्लो छैन भन्ने महशुस गरेको छु ।
७.कतिजना महिला आवद्ध हुनुहुन्छ ?
अहिले हामीहरु ३२ जना छौँ, यो संख्या वर्षेनी बढ्ने अवस्था पनि हुन्छ । किनभने दाङ महिला जेसिजको काम, उद्देश्य देखेरे धेरै दिदीबहिनी महिलाहरु आउनुहुन्छ । अहिले पनि मेरो कार्यकालमा पनि महिलाको संख्या वृद्धि गर्ने काम हुन्छ पक्कै पनि ।
८.घरपरिवारको साथ र सहयोग कस्तो छ ?
म यो स्थानसम्म आइपुग्नुमा मेरो परिवारको नै महत्वपूर्ण साथ छ । मेरो परिवारमा मेरो श्रीमानको साथ, हौसलाले म यो स्थानमा आइपुगेको छु । २÷४ जना अगाडी बोल्न नसक्ने मान्छे आज नेतृत्व समाहल्न सक्ने भएकी छु ।
यो सबै मेरो श्रीमानको मायाँ, साथलै नै हो । महिलालाई परिवार र श्रीमानको साथ नभए अघि बढ्न सम्भव नै छैन् ।
अन्त्यमा सम्झिनुभएकोमा राजमार्ग अनलाईन परिवारलाई धन्यवाद ।
Prevलाउरेको कन्सर्टमा भागदौड हुँदा २ जनाको मृत्यु
Nextसलमानका दुई भाई सोहेल र अरबाजविरुद्ध एफआइआर दर्ता, कोरोना नियम उल्लंघन गरेको आरोप